QM oo ku heshiisay xeerarka hubka ee caalamka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
QM oo ku heshiisay xeerarka hubka ee caalamka
La daabacay onsdag 3 april 2013 kl 13.30
Golaha sare ee hayadda Qarammada midoobey (QM) ayaa go'aan ka gaaray xeerarka la xiriira ka baayacmushatrka hubka ee waddammada caalamka. Waa markii ugu horeeysay ee heshiis noocaasiya uu caalamka ka dhaco ee la xiriira hubka-halista ah sida taangiyada iyo maraakiibta dagaalka.
Wakiilka dalkan Iswiidhen u matala golaha sare ee QM ayaa HAA ugu codeeyey heshiiskan, iyadoona ay wasiiradda baayacmushtarka dibadda Ewa Björling sheegtay mar ay u warrameeysay hayadda wararka Iswiidhen ee TT in aanu heshiiskani saameeyn ballaaran ku yeelan doonin baayacmushtarka hubka ee dalkan.
Goolka heshiiskan laga leeyahey ayaa ah in waddammada heshiiska wax ka saxiixey ey yeeshaan hayad indhaha ku heeysa baayacmushtarka hubka. Waxay hayaddaasi baaritaan ku sameeyn doontaa inta aan hubka la iib-geeyn sida ay suurtagalka u tahay in loo isticmaali karo hubkaa xasuuq iyo falal argagixis-nimo.
Heshiiska ayaa ah mid lagu xakameeyneyo in aan hub laga iibin kooxaha argagixisada iyo qabqableyaasha dagaal ee caalamka.
Ma taabac-san tahay in hubka noocaasiya loo iib-geeyo Soomaaliya?